induction tempering pamusoro | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
kuderedzwa kunotyisa pasi
Chii chinonzi induction tempering?
Induction tempering inzira yekupisa inogadzirisa michina zvimiro sekuomarara uye ductility
Chinhu chikuru chakanakira induction pamusoro pevira remoto kukurumidza. Induction inogona kutsamwisa workpieces mumaminitsi, dzimwe nguva kunyange masekondi. Midziyo inotora maawa. Uye sezvo induction tempering yakakwana kune inline kusangana, inoderedza huwandu hwezvinhu zviri kuitika. Induction tempering inobatsira kudzora kwemhando yega yega yekushandira. Yakabatanidzwa induction hashi zviteshi zvakare inochengetedza yakakosha pasi nzvimbo.
Induction tempering inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemotokari kutsamwisa nzvimbo dzakaomeswa senge shafts, mabara uye majoini. Maitiro acho anoshandiswawo muhubhu uye pombi indasitiri kutsamwa kuburikidza neyakaomeswa workpieces. Induction tempering dzimwe nguva inoitwa mune inoremedza chiteshi, dzimwe nguva mune imwe kana akati wandei akapatsanuka hasha zviteshi.
Yakazara HardLine masisitimu akakosha kune akawanda maficha ekushandisa. Kubatsira kukuru kwemaitiro akadaro ndekwekuti kuomesa uye kutsamwa kunoitwa nemuchina mumwe chete. Izvi zvinounza yakakosha nguva uye mutengo wekuchengetedza mune diki tsoka tsoka zvichienzaniswa neimwe nzira matekinoroji. Nemwenje, semuenzaniso, rimwe vira rinowanzotanga rakaomesa mashopu, riine rakasiyana biravira
ipapo ichishandiswa pakutsamwa. Nyika yakasimba DAWEI Induction Heating Systems anoshandiswawo pakutsvaga kwekushandisa.
Categories FAQ Tags high frequency tempering, kudzivirirwa kunonoka, kuderedzwa kunotyisa pasi, RF inoporesa mishonga, kuzvidzora, kutsvaira kupisa mushonga